Egwuregwu bọọlụ: FIFA 14 na PES 2014 | Akụkọ akụrụngwa
Dị ka afọ ọ bụla, Electronic Arts y Konami ha na ndi iche ha gha enwe na console league FIFA y PES na afọ a na-ese okwu bụ ihe na-akpali karịa na aga n'oge, ebe ndị mgbapụta nke FIFA ha enweela oke doro anya na afọ ndị na-adịbeghị anya.
N'ime mbipụta ndị a ikpeazụ, ụlọ ọrụ abụọ ahụ ewebatala ezigbo mgbanwe na sagas ha ọ bụ ya mere esemokwu a ji dị nso n'afọ a. Yabụ, na-enweghị oge ọzọ, ka anyị chee ihu FIFA 14 y PES 2014.
O doro anya na ebe a Konami nwere ike ịkụ ya ihe ọkụkụ zuru oke Injin Fox, otu injin ahụ nke na-enye ndụ ihe a tụrụ anya ya nke ukwuu Metal Gear siri ike V. Agbanyeghị, ọ dị ka enweela oke ịgba ọsọ maka PES 2014 ga-abata n'ụlọ ahịa na oge, yabụ, anyị gafere ọtụtụ ndị egwuregwu ndị ọrụ ha na-arụghị ọrụ ma ọ bụ ndị na-adịchaghị ka ndị na-eme anụ ahụ na ndị otu ọbara. Dị ka FIFA 14, enweghi ikike ọ bụla dị n'etiti eserese eserese nke gara aga na nke a, n'agbanyeghị na agbakwunyere ihu ihu na ntụkwasị obi na ọtụtụ egwuregwu. Iji gbanye aka ya, o nweela ụlọ egwuregwu nwere ikikere ma ọ na - anọchi anya ha karịa nke PES 2014. Banyere animations, ụfọdụ n'ime FIFA 14 ha na-adịghị rụchaa kwenye, mgbe PES 2014 N’ikpeazụ ọ hapụrụ mmegharị ndị ahụ na-eme ka mmadụ nwee ọhụhụ na-aga n’ihu. Na mpempe, FIFA 14 bụ ihe siri ike karịa nke ọma karịa PES 2014, nke yiri kwa ọsọ ọsọ n'ọtụtụ ụzọ, ọ bụ ezie na ọ na-ahụ tupu na n'ọdịnihu na Injin Fox ọ nwere ike inye ọtụtụ egwuregwu.
A na-emegharị ụda olu nke egwuregwu ahụ maka ihe a na-ahụkarị na nha elele anya na afọ ndị gara aga. Enwere ike PES 2014 egosi mma facets na ihe accentuated Jeremaya mere si ọha na eze dabere ma anyị bụ ndị ọbịa ma ọ bụ ndị obodo, ihe ndị na-eme… ezie FIFA 14 ọ na-anọ n'ahịrị ya na abụ na mmeghachi omume. Ndị na-ekwu maka egwuregwu abụọ ahụ bụ ndị ama ama ama: Carlos martínez y Maldini na PES 2014 y Manolo lama y Paco Gonzalez en FIFA 14. Ọ bụ ezie, na egwuregwu nke Konami, ndị na-akọwa ajụjụ ahụ yiri ka hà nwere horchata na akwara ha ma na-ekwu okwu n'echeghị ya eche ma ọ bụ nke na-enweghị isi FIFA 14. Banyere ụda ahụ, enweghị obi abụọ ọ bụla, EA ahọpụtala ọtụtụ ụdị egwu dị mma karịa nke anyị nwere ike ige ntị na ha PES 2014. Ọzọkwa, m ga-aga karịa maka FIFA 14 dị ka onye mmeri na nkebi a.
Ikekwe nke a bụ akụkụ kachasị sie ike iji tụnyere egwuregwu abụọ ahụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọgwụgwọ e nyere bọọlụ, obi abụọ adịghị ya, egwuregwu kacha aga nke ọma bụ nke anyị na-ahụ na egwuregwu nke Konami: njikwa zuru oke, na-enweghị mmetụta dị egwu nke ịdị arọ na nkwenye ndị a na-ekwenye ekwenye. Na FIFA 14 Ọgwụgwọ enyere bọọlụ abụghị ihe ekwesighi, mana ọ na-ahapụ mmetụta na, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-akpa agwa n'ụzọ dị iche ma na-ebufe ntakịrị mmetụta na-ekwekọ n'okike. Egwuregwu abụọ emela ka nkedo kwụsịlata, na-anwa ịbịaru eziokwu nso dị ka o kwere mee. Na PES 2014 Ọ họrọla ịhapụ "akụrụngwa" nke ụfọdụ omume ma nyekwa ọmarịcha njikwa akwụkwọ ntuziaka na usoro nchekwa / mwakpo yana na ogbugba, na-enwe ikike ịchịkwa ihe ahụ, nke na-enye omimi dị egwu mana ọ na-ewe omume ịmụta. FIFA Ọ na - enye anyị ọrụ ọhụụ mgbe ọ bịara ikpuchi bọl ahụ, ijigide bọọlụ ahụ na agbakwunyela ihe ndị agbakwunyere na - emetụta gbaa - dị ka ọnọdụ, ọ bụrụ na anyị jiri ezigbo ụkwụ gbaa - ... , ma ọ bụghị ha dị oke nkenke, nke na-enye ụfọdụ enweghị usoro ihe nkiri. Ọ bụrụ na m ga-ahọrọ n'etiti abụọ, ikekwe, warara, egwuregwu nke EA m ka m ihe kọmpat dị ka a dum, ọ bụ ezie na nke Konami Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ maka akụkọ na-atọ ụtọ, n'agbanyeghị na ọ ga-egbu maramara.
Usoro egwuregwu na ikikere
Na ngalaba ikikere, EA Ọ gbatara ihe mgbaru ọsọ maka ndị otu niile Konami: PES 2014 enweghị ụlọ ọrụ ikikere nke ikikere nke Njikọ BBVA, na ọ bịarutewo nso na ọha ndị South America na ikikere nke egwuregwu ndị Argentine na Chile, ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ ìgwè sitere na gburugburu ụwa n'ime anyị iru na egwuregwu dị ka Spanish, French na Italiantali. Iji mejupụta ọdịiche, anyị nwere onye nkwusa nwere ohere mepere emepe karịa ka ọ bụla iji kpuchie ikikere n'ụzọ dị otú a. FIFA 14 O nwere ama egwuregwu (karịa 50) na ọgbakọ egwuregwu 33 sitere na mba iri abụọ, gụnyere njikọ Argentina, Chile na Colombia.
Banyere usoro egwuregwu, egwuregwu abụọ a dị ọ bụla. Mgbe FIFA 14 nwere garters na iko ghaa, PES 2014 alaghachila na otu egwuregwu, yana oge niile na asọmpi mba ụwa. A ga-atụkwasịkwara nke a South American asọmpi, ọzụzụ mode, Abụ m Akụkọ Mgbe Ochie na Master otu. FIFA 14 ọ jikoro na ọbụna na-aga n'ihu, na a zuru ezu na miri Manager mode karịa Master otu nke PES 2014. Ma, ọ bụ na online modalities ebe egwuregwu nke EA ejighi akara site na Konami: PES 2014 na-enye ndị ochie gboo, asọmpi na ntanetị n'ịntanetị, na mgbakwunye na 11 vs 11 nke kwesịrị ka mma, mgbe FIFA 14 Njirimara Oge, Enyi, 11v11 ọkụ, Pụrụ Iche Pụrụ Iche, Ego Ego Arena Ego, Oge Njikọ Aka, na FIFA Ultimate Team toro. O doro anya na, egwuregwu nke EA nwere onyinye dịgasị iche iche.
Ọ bụ ezie na ileba anya mbụ ọ nwere ike iyi nke ahụ FIFA 14 dị nnọọ elu karịa PES 2014Eziokwu bụ na enweghị m mmetụta ahụ na-ama jijiji n'ime m dị ka nkwupụta siri ike na nke a na-apụghị ịgbagha agbagha. N'ezie, m ga-asị ee, na ọzọ, EA ọ meriri egwuregwu ahụ ọzọ, mana ọ gaghị abụ site na oke ọdịda. Nke na-atọ ụtọ enwere mgbakwunye na-atọ ụtọ, ọkachasị na PES 2014 ya nnwere onwe nke mmegharị-mgbagwoju anya yana afọ ojuju na-achịkwa-, o yikwara ka sagas abụọ ahụ na-agbakọta ihu na egwuregwu egwuregwu dị mma.
Na ọkwa teknụzụ, ọ dị ka ọ bụ na Konami ha na ya ka na -ekwu Injin Fox oge ahụ bịakwasịkwara ha, ka FIFA 14 ka na-achọ ezi ihe na ya siri ike engine: n'ezie na-esote oru, na PS4 y Xbox One n'okporo ámá bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ esemokwu nke engines Ignite y Injin Fox. Na mkpokọta okwu, FIFA 14 O zuola ma kpochapu ya, mana elegharala ozi ọma a PES 2014, nke n'agbanyeghị na-ekwupụta na ọ dị mkpa ka eme ka ọ dịkwuo nwuo, na-akọwa ụzọ dị mma maka ihe nwere ike ịbụ nkeji bọl na-esote Konami.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu bọl: FIFA 14 na PES 2014
FIFA 14 nyocha